Al Shabaab oo sheegtay in Sargaal Ciidan ku dileen Magaalada Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Al Shabaab oo sheegtay in Sargaal Ciidan ku dileen Magaalada Muqdisho
Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qarax miino oo xalay ka dhacay degmada Waabari ee gobolka Banaadir, waxa ayna Al Shabaab sheegeen in qaraxaasi lagu weeraray sargaal katirsanaa ciidanka Nabad sugida.
War kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lala eegtay sargaal katirsanaa ciidanka Nabad sugida iyo sirdoonka Soomaaliya , waxaana warka Al Shabaab ku sheegeen in qaraxaasi sababay Dhimasho iyo dhaawac.
Al Shabaab ayaa sheegtay in sargaalka qaraxa ku dileen uu ahaa gaashaanle katirsan Hay’adda Nabad sugida oo magaciisa kusoo koobeen Nuur, waxa ay sidoo kale qaraxaasi Al Shabaab sheegeen in ay ku dhaawacmeen askar.
“Mujaahidiinta ayaa qarax ka dhacay degmada Waaberi ku dilay sarkaal katirsanaa sirdoonka dowlada Soomaaliya, laba askar oo ilaala u ahaana waa ku dhaawacmeen” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Qaraxyada miino ee lala eegto gaadiidka ay wataan saraakiisha iyo masuuliyiinta dowlada ayaa mudooyinkan dambe kusoo badanaya magaalada Muqdisho, qaraxyadan ayaana mararka qaar waxyeelo kasoo gaartaa dad shacab ah.
Previous articleDood ,Doorka Xaafada ka saaran Bad baadinta Dalka Soomaliya
Next articleAl Shabaab claims to have killed an army officer in Mogadishu
Maxaa kala socotaa Habka lagu Heshiisiyey Kheyre iyo Farmaajo
Shaqaalaha Gobolka Banaadir oo wax Mushaar ah Qaadan...